KALA DUWANAANTA RASPBERRY CAADIGA AH CANADIAN: SHARAXAAD, ASTAAMO, TALOOYIN KU SAABSAN SII KORDHAYA - RASPBERRY SII KORDHAYA
Ugu Weyn Ee Raspberry sii kordhaya
Raspberry Canadian: sharaxaad iyo beerista noocyo kala duwan
Maanta waxaa jira tiro badan oo kala duwan oo raspberry ah, kuwaas oo ay ka mid yihiin kuwa ugu caansan waa kuwo caan ah. Dhawaan, kala duwanaanta raspberry Canadian, taas oo ah wakiil caan ah oo ka mid ah noocyada ugu fiican ee kooxdan, waxaa inta badan laga helaa siraha dacha. Maqaalkeenna, waxaan ku siin doonaa sharaxaad ku saabsan noocyadan iyo sharaxaad ka bixi sida loo daryeelo.
Ka hor inta aadan u gudbin xulashada noocyada beeritaanka, waa inaad si taxadar leh u eegtaa sifooyinka. Abuuritaanka raspberries ee qorshaha, waxaad u baahan tahay inaad fahamto waxa dalagga ee sugaya aad, sida loo daryeelo duurka. Aan isku dayno inaan ogaano waxa raspberry Canadian ah iyo siin sharaxaad ka duwan noocyada kala duwan.
Kuurkan waxaa matalaya dhir dheer, oo dhererkeedu gaaro laba mitir. Qeybaha kala duwan ee kala duwan ayaa ka duwan kan caadiga ah iyadoo ay joogaan jiritaanka qaro weyn iyo maqnaanshaha cirbadaha, taas oo ay ugu wacan tahay inta badan loo yaqaan "geedka raspberry". Raspberry Canadian - dhirta qoyaan-jecel, aad u liita u dulqaadan kara xitaa gaaban gaaban iyo heerkulka sare.
Canadian Raspberry, sharraxaadda nooca kala duwan ee aynu ka fekereyno, ayaa caan ku noqday sifooyinka tayada cajiibka ah ee miraha. The berry leeyihiin dhadhan macaan, aad u casiir leh. Waxaa lagu kaydin karaa wakhti dheer, iyada oo aan lumin sifadooda. Iyadoo la'aanta qoyaan, midhaha ayaa koraan yar, laakiin dhadhanka waa la ilaaliyaa.
Waa muhiim! Haddii la beero qorshe ah ciidda acidic, waa inaad hubaal ku dartaa lime si aad u qodo dhulka. Haddii tani aan la samayn, duurka u ma qaadan doono xidid iyo dhimanayaan.
Kala duwan ayaa si wanaagsan u dhalan kara: hal baadiyaha ayaa soo saari kara qiyaastii 7 kg dalagga, iyo in la ilaaliyo talooyinka dhirta, waxaad heli kartaa 12 kg oo berry ah oo ka socda baadiyaha.
Talooyin iyo khiyaamo loogu talagalay koritaanka ramsberry
Si maadada Canadianka ah ay u koraan caafimaad iyo soo saaraan goosashada wanaagsan, beerto waa in si habboon loo fuliyaa oo daryeel ku habboon duurka waa in la siiyaa.
Raspberyadu si fiican bay u koraan meelaha meelaha iftiimiya oo aan jirin wax qorshe ah. Carro dhexdhexaad ah ayaa qaban doonta. Waxay u fiicantahay in lagu beero geed dabayli ah, halka dhacda biyaha dhulka ay tahay inay noqoto mid qoto dheer. Ma aha inaad doorato inaad beerato meel ay yaanyo iyo baradho u isticmaalaan inay koraan.
Ma taqaanaa? Ka mid ah berry of saddex midab ah - huruud, casaan iyo madow, tirada ugu weyn ee fiitamiin waxaa ku jira miraha madow. Raspberry huruud ah waxaa ku jira nafaqooyin ka yar marka loo eego dhiggooda.
Wixii beerashada raspberries inta badan waxay isticmaalaan habka baadiyaha. Diyaargarow for baadiyaha kasta waa lagama maarmaan si loo diyaariyo godad, taas oo size 50x50 cm. Nidaamka asaasiga ah waxaa lagu daaweeyaa xal digada ah dhowr daqiiqadood. Xaaladdan oo kale, xididdada waxay u baahan yihiin inay si tartiib ah u toosiyaan una jiifaan dhulka. Ka dibna waxay si fudud u rusheeyeen. Inta u dhaxeysa geedo waxaa lagu talinayaa inay ka tagaan masaafada ugu yaraan hal mitir.
Marka la isticmaalo habka beerto-sida cayayaanka sida, waxaa lagama maarmaan ah in la diyaariyo xarig gaar ah kaas oo bacrimin la isticmaalo, ash alwaax, humus. Fasaxyada waa in la dhigaa ugu yaraan 40 cm kasta oo kale.
Hubi noocyada noocyada raspberry sida "Caramel", "Cumberland", "Tarus", "Atlant", "Yellow Giant", "Gusar".
Waxaa lagu talinayaa in la beero raspberries guga - sidaas geedka wuxuu ka heli doonaa xidid ka fiican. Si kastaba ha noqotee, soo degitaanka waa in la sameeyaa ka hor inta ku hari kow ka ah duurka oo laga bilaabo koritaanka firfircoon.
Markaad beerto xilliga dayrta, hubi inaad ku dhufatid carrada hareeraha geedaha casaanka - tani waxay badbaadin doontaa burooyinkeeda, kuwaas oo ku yaal qaybta hoose, laga bilaabo cimilada qabow.
Geedka raspberry uma baahna daryeel adag. Iyada oo si joogto ah loo hirgeliyo talooyinka aasaasiga ah, duurka ayaa kori doona caafimaad leh.
Mid ka mid ah shuruucda asaasiga ah ee daryeelka jirridda - dhajinta si joogto ah loogu baahan yahay samaynta geed, oo leh 5-7 dushooda. Waxa kale oo lagama maarmaan ah in la kordhiyo tirada caws ubaxa - tani waxay si weyn u kordhinaysaa dhalidda. Nidaamka jiidashada ayaa lagula talinayaa guga horraanta - sidaa daraadeed bisha Agoosto tiro badan oo ugxan-yari ayaa soo bixi kara.
Waa muhiim! Si loo ilaaliyo caafimaadka geedka raspberry, waa inaad si joogto ah uga saarto cayayaanka, jeermiska iyo caleemaha.
Geedka raspberry wuxuu u baahan yahay in badanaa la waraabiyo, qiyaastii 5 litir oo biyo ah ayaa loo baahan doonaa halkii baadiyaha. Waraabin badan ayaa loo baahan yahay marka dhirta ubaxu dhasho iyo midho dhoobo. Waqtigaa marka uu ugxan-soo-baxo, waxaa lagama maarmaan ah in la quudiyo iyadoo la isticmaalayo Bacriminta dabiiciga ah iyo macdanta.
Ma taqaanaa? Raspberry waa antidepressant dabiici ah. Qodobka sare ee copper ee berry wuxuu kaa caawin doonaa inuu la qabsado xitaa walbahaarka daran.
Ka ilaalinta cudurada iyo cayayaanka
Si loo ilaaliyo duurka raspberry laga bilaabo dhimashada natiijo ka timid cudur ama cayayaanka, waxaa lagula talinayaa inay fuliyaan tallaabooyinka kahortagga soo socda:
Heerka koowaad ee wax soo saaridda waxaa la sameeyaa horraanta gu'ga. Waxay ka kooban tahay beerashada dhulka u dhaxaysa safarka - tani waxay ka takhalusi doontaa cudurrada iyo cayayaanka ee hibernate ee ciidda iyo harta dhirta.
Marxaladda labaad waxay ku dhacdaa wakhtiga marka burooyinkeeda la jajabiyo. Mastarad of duurka waxaa lagu fuliyaa diyaarinta "Aktely" ama "Novaktion". Xalaalahaani waxay burburiyaan kuwa lamid ah rasaasta, weelils, qulqul-daro, caarada iyo shilinta.
Marxaladda saddexaad waxaa lagu fuliyaa xilliga ubaxyada. Baadhitaan ballaaran oo ka mida duurka ayaa la fuliyaa, geedaha ay ku dhufteen curl, masaakiif, iyo chlorosis infekshanka ayaa la ogaadaa oo la burburiyaa.
Heerka afraad ee tallaabooyinka ka hortagga ka dib goosashada ayaa la goostayaa. Soo saarey jarida iyo gubashada caleemaha, taas oo otplodonosili. Sidoo kale, warshadda waa in lagu daaweeyaa xal "Aktellika" ama "Novaktion" si loo burburiyo cayayaanka. Dareeraha Bordeaux waxaa loo isticmaali karaa qanjiraha.
Canadian Raspberry waxay soo aruurisay dib-u-eegid aad u wanaagsan, caankiisuna waa sii kordhayaa sanad walba. Haddii aad jeceshahay berry, waxaad rabtaa inaad ku raaxaysatid dhadhanka wanaagsan xilli kasta, waxaan kugula talineynaa inaad dooratid kala duwanaanta noocaan ah ee beerista xagaaga xagaaga.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Raspberry sii kordhaya 2019